के गोंगबु विकृतिको केन्द्र बन्दै छ ?::KhojOnline.com
श्रोतका अनुसार यसरी देहव्यापारमा लाग्नेहरु १५ देखि ४० वर्षसम्मका महिलाहरु रहेको पाइएको छ ।
होटेलवालासितको सम्पर्कको आधारमा ती महिलाहरु यस्तो कार्यमा लाग्छन् ।
काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा भौतिक विकास निमाणको काम तिब्रगतिमा भइरहेको छ । हरेक ठाउँमा राम्रो कामको विकास जुन गतिमा बढीरहेको हुन्छ, त्यहाँ नराम्रो कामले पनि त्यत्तिकै गति लिइरहेको हुन्छ । यहाँ साँस्कृतिक सम्पदा विकास र संरक्षणको काम गर्ने संघ संस्थाहरु पनि खुलिरहेका छन् तर यही ठाउँमा समाजले पचाउन नसकिने गलत धन्दापनि विकास भइरहेको पाइएको छ ।
जुन गतिमा विकृतिजन्य कामहरु भइरहेका छन् तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काममा सम्बन्धित निकायले खासै ध्यान दिएको पाइएको छैन । सानातिना कार्यक्रमहरुमा रिबन काट्ने गरेको त देखिन्छ तर विकृति रोक्ने काममा खासै ध्यान नदिनु विडम्बना हो । यता नगरको ९ र १० वडा जो नगरको आर्थिक श्रोतको मुख्य केन्द्र हो त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनताको काममा ध्यान नदिएको गुनासो आएको छ ।
टोखा नगरपालिकाको नयाँ बसपार्क र गोंगबु क्षेत्रतिर जोडिएको स्थानतिर आजभोली अलि समाजमा अपाच्य गतिविधिहरु बढेको भन्ने रिपोर्टहरु आइरहेका छन् । सुन्नमा आए अनुसार यो क्षेत्रमा ३ किसिमका गोप्य धन्दाहरु चलिरहेको पाइएको छ ।
१ ) होटेलहमा यौन व्यवसाय
२) औषधी पसलहरुमा लागुऔषध विक्रिवितरण
३) साना ठूला अपराधिहरु लुक्ने र योजना बनाउने ठाउँकोरुपमा विकास ।
होटेलहरुमा यौनव्यवसायः टोखा नगरपालिका देशकै सबैभन्दा ठूलो बसपार्कसँगै जाडिएको यहाँका ९ र १० नम्बर वडामा साना तथा ठूला होटेलहरु सञ्चालनमा छन् । यता नगरपालिकाको माथिल्लो भाग झोर, साङ्ला लगायतकास्थानहरुमा पनि होटेलहरु खुल्नेक्रम जारी नै छ । नयाँ बसपार्क र गोंगबु वरपरका होटेलहरुमा होटेलका कोठाहरु घण्टे भाडामा लगाउने गरेको पाइएको छ ।
यसरी कोठाहरु घण्टेभाडामा दिएर ती होटेलहरुमा यौनधन्दा चलाएकोपनि सुन्नमा आएको छ । यहँका केही होटेल व्यवसायीहरु यसरी सेटिङ मिलाएर होटेलहरुमा घण्टाको हिसावले यौनधन्दा गराउन सकेमा पैसा कमाउन सकिने भनाइ रहेको छ । स्थानीयहरुका अनुसार गोंगबु क्षेत्र वरपर एउटा यस्तो सञ्जाल बनेको छ जसले ग्राहककोलागि युवती आपूर्ती गर्नेगर्छ । नयाँ होटेल खुलेको थाहा पाएभने सो सञ्जालका मान्छेहरु ती होटेल मालिकहरुकोमा पुगेर आफ्नो फोन नम्बर दिन्छन् र केटी चाहिएमा सम्पर्क गर्न भन्छन् ।
यो व्यवसाय हाल यतिसम्म फस्टाएको छ की, मानिसहरु होटेलमा खान र बस्न आएभने होटेलवालाहरु ग्राहकलाई ‘बासमात्र बस्ने की साथ पनि चाहिने हो’ ? भनेर सोध्छन् । ग्राहकहरु कुरा नबुझेर अन्कनाए भने होटेलवाला थप्छन्, ‘बास बसेर त हेर्नुस जस्तो भन्यो त्यस्तै पाइन्छ ।’ सो क्षेत्रमा मोटर मर्मत गर्ने ग्यारेजहरुमा काम गर्ने केही कामदारहरुका अनुसार प्रहरीले त्यस्तो कार्यमा संलग्नहरुलाई रंगेहात समाएपनि तत्काल छोडिहाल्छन् । त्यो त प्रहरीको देखाउने काम मत्र भएको छ ।
स्थानीयहरुको भनाइ हनुसार केही होटेलवालाहरु त गाउँबाट सहर आएका सोझा गाउँलेहरुको पैसा लुट्न पनि पल्केका छन् । होटेलवालाहरु गाउँलेसँगै रक्सी खान बस्नेअनि उनीहरुको नाममा धेरै बिल देखाएर पैसा असुल्ने र पैसा नदिएका कुटपटि गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।
श्रोतका अनुसार यसरी देहव्यापारमा लाग्नेहरु १५ देखि ४० वर्षसम्मका महिलाहरु रहेको पाइएको छ । होटेलवालासितको सम्पर्कको आधारमा ती महिलाहरु यस्तो कार्यमा लाग्छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण ती महिलाहरु विहेको लगत्तैपछि पनि यौनव्यवसायमा लागेकोपनि पाइएको छ । यस्ता महिलाहरु श्रीमानसित सम्बन्ध राम्रो हुँदासम्म बस्ने र श्रीमानसित सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो भने झगडा गरेर यस्तो काममा पेशेवर नै भएर लाग्ने गरेकोपनि पाइएको छ ।
हिजो आज त अश्लील नामबाट फेसबुक एकाउन्ट खोल्ने र त्यसमा टोखानगरको नाम जोड्ने गरेको पनि पाइएको छ । यसैस्थानमा रिचार्ज कार्डमा ठगी गर्ने, फ्रिज, टेलिभिजनदेखि सुनको सिक्री तथा औंठीहरुको उपहार आदन प्रदान गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।
यस्तो कार्यमा स्थानीय व्यवसायी,मजदूर,विभिन्न संघसंस्थामा कामगर्ने जागिरेहरु लाग्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । साथै कलाक्षेत्रमा काम गर्ने केही मान्छेहरु र केही समयकोलागि काठमाडौं आउनेहरु यस्तो कार्यमा लागेको पनि पाइएको छ । यी र यस्ता कार्यले टोखानगरलाई कस्तो संस्कारतिर डोर्याइरहेको छ ? प्रश्न उठेको छ । यी र यस्तै गतिविधिहरु बढ्दै गएभने भोली हाम्रै आफन्तहरुलाई हामीले नै त्यस्तो हालतमा देख्न पर्योभने समाज र परिवारको हालत कस्तो होला ?
उता नयाँबसपार्क वरपरका धेरै होटेलहरुमापनि यस्ता कार्यहरु भइरहेका रिपोर्ट पनि आउने गरेका छन् । खासगरी नयाँबसपार्क र मित्रनगर वरपर त परिवारका सदस्यहरुसित होटेलमा बस्नै नसक्ने वातावरण छ भन्नेपनि सुनिएको छ । यस्ता कार्यलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा वडा कार्यालयबाट यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने योजना तत्काल बन्नु पर्छ । नत्र हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले कस्तो कुराको विकास गर्न खोजेका हुन भनेर प्रश्न उठ्ने बेला भइसकेको छ ।
गोंगबु टोखा नगरपालिकाको क्षेत्र भएकोले नगरपालिकाले नै यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्न योजना बनाउनै पर्छ । नत्र टोखा नगरपालिकाले सेक्स टुरिजमको विकास गर्न खोजेको पुष्टि हुनेछ । यस्तो कुरा पुष्टि भयो भने हामी सबैको इज्जत माटोमा मिल्नेछ । उता मान्छेहरु बजारक्षेत्रमा हुने गरेका यौनधन्दाहरुमा होटेल ब्यवसायी,यौनकर्मी र प्रहरीको मिलेमतो रहेको आशंका गर्नेर्छन् ।
मानौं कुनै ठाउँ कोही रंगेहात समातियो भने प्रहरीले समाएर लैजान्छ तर तिनलाई कारवाही भएको देखिँदैन । यस्तोखाले समस्या प्रहरीले नै सुल्झाउँछ भनेर स्थानीयहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् । तर यस्तो समस्याको समाधान प्रहरीले मात्र गर्न सक्दैन । समुदायका सबै जिम्मेवार सदस्यहरुले मिलेर यस्ता समस्या हटाउनु पर्छ । त्यसैगरी टोखानगरपालिका भित्र पर्ने गोंगबु वरपर लागुऔषधपनि बिक्रीवितरण भएको पाइएको छ । यो क्षेत्रमा लगभग २५० जति साना ठूला औषधी पसलहरु छन् ।
ती मध्य आधाजसोले औषधी विक्री गर्ने अनुमति नलिएको अनुमान गरिएको छ । तर उनीहरुले बिना जाँच अनुमानको आधारमा बिरामीहरुलाई औषधी बिक्री गरिरहेका छन् । बिना जाँच बिक्री गरिएका औषधीहरुले मान्छेको शरिरमा लागुपदार्थकोरुपमा काम गर्न थाल्यो भने मान्छेको शरिरको हालत के हुन्छ ?
अनि त त्यसरी बिक्री भएका औषधीहरुलाई लागुऔषध भन्नुपर्ने हुन्छ । साथै रोग निको पार्नकोलागि खाएको औषधील लागु औषधको काम गर्न थाल्यो भने वास्तविक लागु औषधको बिक्रीको बेचविखन झन बढ्छ । यदि त्यसो भयो भने समाज बर्बाद हुन्छ । नगरपालिका तथा प्रहरीले यो समस्या चाँडै हल गर्नेतिर नसोच्ने हो भने समस्या झन विकराल भएर जान्छ । हाल समाजमा साना साना केटाकेटीहरुपनि नसालु पदार्थ सेवन रिरहेको देखिन्छ ।
यसले विकराल रुप लिनेवाला छ । यसो भयोभने काठमाडौंको टोखा नगरपालिका लागुपदार्थ र यौनधन्दाको केन्द्र बन्ने भयो । अनि यस्ता कार्यहरु बढ्दै गएभने यो क्षेत्र भोली अपराधिक घटनाको पनि केन्द्र बन्नसक्छ । टोखा नगरपालिकाले यसबारेमा चाँडै नै सोंच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
हाल पनि नयाँ बसपार्क क्षेत्र अपराधीहरु लुक्ने, योजना बनाउने सुरक्षित क्षेत्रकोरुपमा चिनिएको छ । प्रहरीले जतिपनि अपराधी समाउँछ, धेरैजसो यही क्षेत्रबाट समाउँछ । यसबाट टोखानगर र काठमाडौंकै इज्जत बचाउन गाह्रो हुनेवाला छ । यस्तो काममा तत्काल पहल नथालेर टोखा नगरपालिका सुतेर बस्न मिल्दैन । यो कुरा नियन्त्रण गर्ने र व्यवस्थित गर्ने काम राज्यको हो । जनताले त सहभागिता जनाउने हो ।
बिहि, अशोज २, २०७६ मा प्रकाशित